Izibalo zibonisa ukuthi uhlobo ezolimo European elinesimo predominance abalulekile imfuyo (yobisi yenkomo), ingulube kanye nezinkukhu. Ikakhulukazi amazinga aphezulu nemfuyo lwenziwe eDenmark.
Hlobo luni zwe ngokuthi "ipulazi yobisi eYurophu"? Omunye ngobukhulu abakhiqizi uwoyela, ushizi, inyama yengulube, amaqanda emhlabeni futhi ubisi ngokukhethekile - Denmark.
Kafushane mayelana nezolimo wezwe
55% wendawo Denmark is asetshenziswa kwezolimo. Kusukela ekupheleni kwekhulu le-19 kwaba kuleli zwe onguchwepheshe nemfuyo. Kukhethwa ikakhulu ezifanelekayo ukufuya izinkomo nezingulube. Kule ndaba, iningi nokukhiqiza izitshalo isetshenziswa njengoba kokudla kwezilwane.
Ngenxa crisis eminyakeni yamuva, indima yokukhangisa ezolimo Danish kwehle kancane. Sekube nokuncipha kwenani lamapulazi ngesibalo esingaphezu kwengxenye kuqhathaniswa 1975, waqala ukunqinda umhlaba Holdings. Naphezu kwakho konke lokhu, Denmark liphakathi emazweni amaningi athuthukile, ikakhulukazi ukwenziwa inyama nobisi.
Denmark - "yobisi epulazini e-Europe"
Danish imfuyo epulazini kufanele waqaphela njengoba omunye the best emhlabeni ngokuya ubuhlobo babo imvelo, imvelo. Futhi, imishini zobuchwepheshe emapulazini nasezindaweni ezingeni lelisetulu ukuphathwa professional nesandla ezingeni ezinhle Ukuvikelwa kwezilwane Danish. Lesi sakamuva asisebenzi kuphela ukulondoloza impilo yabo, kodwa futhi ukuba ubuhlobo nezimiso zokuziphatha kubo ngesikhathi ngiboshiwe yabo.
It zisendaweni ebalulekile, kanye nezimo zokusebenza kakhulu. Futhi lokhu awasebenzi kuphela imfuyo.
Endaweni efanele zasemazweni asathuthuka. "Ipulazi Dairy eYurophu" sibonga lesi simo sengqondo kubaholi isimo futhi kuso sonke isibalo sabantu ekukhiqizeni, eqinisa isikhundla salo ezimakethe zomhlaba jikelele futhi athuthukise umphakathi wabo.
Kuyaphawuleka ukuthi uthunjana the Queen, Kunyatheliswa Iohim, imfundo kuyinto sezolimo namahlathi kanye he khulumela emhlabeni wonke-ke eyisibonelo (Danish) imfuyo ukuphathwa.
Geography kanye nesakhiwo kwezomnotho
"Dairy ipulazi eYurophu" - iyizwe eliyisiqhingi etholakala engxenyeni esenyakatho-Europe. Njengengxenye iziqhingi Denmark sika abangaphezu kuka-400 kule nhlonhlo, enkulu kunazo zonke zazo - esiqhingini Zealand, Funen (okwazalelwa kuyo Hans Christian Andersen - Odense), Bornholm, Falster, Lolland. Futhi eDenmark kukhona esikhulu kunazo zonke emhlabeni-cishe ngo-Greenland kanye Faroe Islands, elise-Atlantic Ocean.
Denmark has umngcele umhlaba kuphela eJalimane. Entshonalanga yezwe - North Sea, oLwandle iBaltic - ezivela eMpumalanga.
Bangaphezu kuka-5.5 million abantu - labantu Denmark. Kulaba, abayizigidi ezingu-1,3 - abakhileyo dolobha nasezindaweni ezizungezile. Ukusebenza yobudala labantu e-Denmark (iminyaka engu-70) abantu abangaba izigidi ezingu-4.
"Dairy ipulazi eYurophu" njengoba amandla ezomnotho main kuyinto ezolimo, umkhakha ephumelelayo futhi emkhakheni wemisebenzi.
Ngokuvamile, umhlambi yezwe Lihlanganisa izinto ezingaphezu kwezigidi ezingu-1.6 wezinkomo, izinkulungwane 580 amakhanda awo -. Umhlambi avalele izinkomo.
Namuhla 3,700 avalele amapulazi Denmark ukukhiqiza esilinganayo ubisi, okuyinto engu-50 edlule ekhiqizwa 141.000 amapulazi. Shono Denmark iwine isicoco olungekho emthethweni - ". Ipulazi yobisi yaseYurophu"
Ukukhiqiza yisilinganiso sesifundo esisodwa yobisi inkomo - 29.5 amalitha ngosuku, kuyilapho ingxenye engaphezu kweyikhulu edlule - ku 12 amalitha. Ngisho ivolumu esimisiwe mayelana 60 amalitha ubisi ngosuku.
Inombolo emaphakathi Imihlambi avalele izinkomo welinye ipulazi - 156 imigomo. Kukhona manje epulazini elikhulu nemfuyo ukuze imigomo 500 noma ngaphezulu.
Leli pulazi elingu-ngobukhulu - ne izinkomo Jersey Izinkomo.
Ukukhiqizwa naphakathi ubisi umhlambi ngonyaka abantu abalinganiselwa ezigidini ezingu-1,4 wamalitha.
EDenmark ukukhiqizwa ukukhiqizwa yobisi athunyelwa kwamanye amazwe ikakhulukazi eJalimane (ikakhulukazi ushizi); UK kanye Sweden (noshizi). Inyama yenkomo kanye inyama yenkonyana - eJalimane, e-Italy naseSpain.
Ubude ukuthekelisa isisindo 2/3 yonke imikhiqizo ye nemfuyo. Lokhu kubonisa eliphezulu futhi kuqinisekisa title yayo yezwe - ". Epulazini avalele eYurophu"
Ekuphetheni, ukubaluleka - nemibandela imfuyo ukuphila
Ngokusemthethweni izilwane Danish babe isimo ihlanzekile kakhulu futhi unempilo.
Lapho ekhula imfuyo eDenmark ungakaze usebenzise noma iyiphi hormone yokwakha kwemisipha. Ngakho-ke, inyama Danish, kanye nezilwane ngokwabo, ukuthandwa ihlanzekile kakhulu futhi unempilo futhi ekujabuleleni izwe ububanzi.
Zonke amapulazi yobisi kuleli zwe vele bawela ngaphansi kohlelo isimo ukuqapha izinga imikhiqizo ekhiqizwa, ukulondolozwa kwemvelo kanye nokuqapha ngokucophelela indlela yokwakheka ubisi.
Lapha futhi imithetho eqinile eYurophu ukuvikela izilwane.
Izimonyo Bourjois Paris: Nalapha ngangifisa Paris
ECrimea (ezizimele) Sea: I iholide kangcono wonke umndeni